Rawe Clostebol Acetate ntụ ntụ (855-19-6) hplc ma98% | AASraw
/ ngwaahịa / ndị ọzọ na- / Clostebol Acetate (Turinabol) ntụ ntụ
SKU: 855-19-6. Category: ndị ọzọ na-
AASraw nwere njikọ na mmepụta site na gram ka usoro nchịkọta nke Clostebol Acetate (Turinabol) ntụ ntụ (855-19-6), n'okpuru usoro CGMP na usoro nchịkọta mma.
Clostebol Acetate (Turinabol) ntụ ntụ video
Clostebol Acetate (Turinabol) ntụ ntụ Characters
aha: Clostebol Acetate (Turinabol) ntụ ntụ
Molekụla Formula: C21H29ClO3
Ọbara arọ: 364.91
Clostebol Acetate (Turinabol) ntụ ntụ eji mee ihe na steroid
Raw Turinabol ntụ ntụ aha
Clostebol Acetate (Turinabol) powder (CAS 855-19-6), nke aha 4-chlorotestosterone, tinyere aha aha Tbol, Macrobin, Steranabol, Alfa-Trofodermin, Megagrisevit.
Turinabol (Chlorodehydromethyltestosterone, nke a na-akpọ 'Tbol' na Oral Turinabol) bụ n'ezie ụdị nke Dianabol (Methandrostenolone), nke mere na ọ bụ n'ezie ngwakọta nke usoro nke Dianabol na Clostebol (4-chlorotestosterone). N'ihi ya, nke a bụ ihe kpatara aha ahụ bụ 4-chlorodehydromethyltestosterone. Mgbanwe ndị a na-agbanwe na nhazi nke ya na-eme ka ọ ghara ịbụ nke aromatazable ma nweekwa ọnụ ọgụgụ androgenic dị ala, nke nwere ike ịbụ na a kpọrọ aha Turinabol dị ka 'Dianabol Dianabol'.
Raw Clostebol Acetate ntụ ntụ Usage
Turinabol nwere ọnụ ala androgenic dị ala nke 6 na njirimara ike anabolic nke 53, nke a na-eme ka ọ dị nso zuru oke na iji atụle mmetụta na uru. N'ihi ndị dị ka ọnụ ala androgenic dị ala, ihe otutu, mmegide, oke iwe na ume na-abawanye ụkọ, mana ọ bụghị nke dị adị. E jiri ya tụnyere nne na nna ya Dianabol, ọ bụ ike na anabolic na bodybuilders adịghị ahụ Oral Tbol dị ka uka inweta gị n'ụlọnga.
Turinabol nwere ihe dị ka ọkara ọkara Testosterone anabolic, ya mere a na-adụ ndị dosages dị iche iche nke 40-60mg kwa ụbọchị dịka mmeghe. Turinabol dosages nwere ike karịa 80-100mg kwa ụbọchị, ma bodybuilders na-akọ mmetụta dị iche iche na-amalite ịrị elu, ebe uru na-anọgide na-adịgide adịgide.
N'ihi ikewapụ nke ya na androgenic ya na mmetụta nke anabolic, ọ bụ onye na-adịghị ike anabolic steroid karịa nne na nna ya bụ Dianabol. Otú ọ dị, mmesi obi ike na Tbol bụ na site n'ikike ọ bụla nwere ike imepụta ahụ, ọ ga-eme ka ọ dịkwuo ala n'ụzọ mmetụta nke androgenic na enweghi mmetụta nke estrogenic (n'ihi na ọ gaghị enwe ike ịkụnye n'ime Estrogen). N'ihi ike ya nke na-adịghị ike karịa Dianabol, a na-ewere doses chọrọ iji nweta mmetụta site na Tbol dị oke elu (a ga-akọwa nke a n'oge na-adịghị anya na ngalaba Tbol doses nke profaịlụ a).
N'ikpeazụ, ndị na-eme egwuregwu na ndị na-eme egwuregwu na-atụ anya na ọ ga-adị mma ma ọ bụrụ na ha enweghi ihe ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ ihe ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ ihe ọ bụla. Enweghi ike ịchọta oke ike na ike na-enweghị ihe ọhụụ n'ihi enweghị ike anabolic, mana ọ ga-atụ anya na ọ ga-adịgide adịgide ma ọ bụrụ na ọ dị mma. A na-ejikwa ya dịka ezigbo onye na-egbu egbu n'oge oge oke ntụsara ahụ ma ọ bụ tupu ịkwado nkwadebe maka enweghị ike ịbanye na Estrogen. Ike nke Turinabol na-enwu enwu dị ka ihe na-eme ka ndị ọzọ na-arịa ọrịa steroid mgbe ọ na-agba ọsọ (stacked) na ndị ọzọ anabolic steroid n'ihi ike ya agbụ na SHBG. Icheta na SHBG na - enye ohere ka ndị ọzọ na - arịa ọrịa anabolic ndị ọzọ a na - egbochi ya iji nwee ike ịrụ ọrụ ha, ebe SHBG na - egbochighị ya, nke bụ uru ọzọ ọ na - egosi.
Ịdọ aka ná ntị na Raw Turinabol ntụ ntụ
Ngwa ngwa-ngwa nwere ike ime ka sodium, njigide mmiri, ya mere nkwụsị sodium kpatara site na ncha nke onye na-arịa ọrịa ahụ. Ọrịa afọ ime mmụọ, ọbara mgbali elu, edema, ndị ọrịa cancer prostate na ndị ime ime na-ezere iji. Iji ogologo oge mee ihe nwere ike ime ka ụmụ nwanyị nwee oke nwanyị.
Raw Clostebol Acetate ntụ ntụ Ntuziaka ọzọ
Clostebol bụ onye na-adịghị ike AAS nwere ike iji dịka ọgwụ arụmọrụ. Ugbua World Anti-Doping Agency ka amachibidoro ya ugbu a. Oral Turinabol, na-ejikọta ihe ndị dị na clostebol na metandienone, bụ nke e ji mee ihe na usoro nkwado doping nke East German.
A na-ejikarị ụbụrụ na-ejikọta ya na ndị ọzọ anabolic steroid, nke a bụ n'ihi na ọ bụ akụkụ dị nwayọọ ma na-eweda ọkwa dị na testosterone. Turinabol abụghị ihe anabolic ma ọ bụ androgenic nke steroid, ya mere ndi mmadu na-enweta ndi mmadu na-acho Tbol. A na-eji anabolic dị nwayọ a mgbe ọ na-egbu ihe, oge na-abaghị uru na tupu ịlụ ọgụ.
Turikbol cycles nwere ike ịgụnye na-agba ọsọ naanị ọnụ n'etiti 40-60mg kwa ụbọchị maka izu 6-8. Nke a ga - enye gị aka nke ọma, gbanye ahụ ike na ikwe ka onye ọrụ steroid mee ka ahụ sie ike ma ọ bụrụ na ị na-enwe calorie deficit. Imebi mgbapu protein bụ ngwá agha dị oké mkpa mgbe ị na-abanye na 10% abụba abụba bụ ihe mgbaru ọsọ.
Nchịkọta ndị ọzọ nke Oral Turinabol nwere ike ịpụta ogige ndị ọzọ dịka; A na-eji Testosterone mee ihe maka mmetụta synergistic. A na-eji obere oge a na-eji ọgwụ Testosterone eme ihe. Njikwa nke Testosterone na 100mg jiri ụbọchị Turnọn 60mg kwaa ụbọchị ọ bụla na-adịgide adịgide ruo ụbọchị 8 na-adịgide adịgide bụ ebe dị mma maka ikpo ọkụ ahụ na-anwụ anwụ maka oge okpomọkụ.
Dịka ọmụmaatụ, dịka ọmụmaatụ, na-eji Testosterone Enanthate maka izu 12, a na-ekwupụta okwu ọnụ maka izu 4-6 mbụ mgbe Testosterone "kicks in". Nke a bụ okwu a na-eji eme ihe mgbe ọkwa ọkwa plasma ọbara dị n'ogo ha ma nweta uru na ngwongwo muscle na njikọ protein dị elu.
Turinabol nwere ike ịmepụta akwara ndị dị ike na ogologo oge. Ya mere, onye na-eme egwuregwu na-eji ya eme ihe ekwesịghị ịtụ anya ka ọ nweta ume, ike na arọ. Ọ bụ "ogologo oge" anabolic steroid.
Ekele ya dị nro, ọ na-etinye ya n'ahụ ngwa ngwa, nke n'aka nke ya na-ewepụ ndị metabolite site na mmamịrị. Usoro ngbochi na-emegidekarị Turinabol ma ọ bụrụ na onye na-eme egwuregwu na-akwụsị ọgwụgwọ na 5 ụbọchị tupu asọmpi.
Turinabol anaghị eduga na mmiri na-egbochi ya n'ihi mmiri ya na mineral. Ọ bụ nnoo obere androgenic karịa ndị ọzọ anabolics dị ka Dianabol. Àgwà a na-enyekwara ndị inyom aka iji ya na-adị mfe, ọ bụ ezie na ha ga-akpachara anya ka ha ghara ịgafe ogologo oge ọgwụgwọ.
N'ikpeazụ, nchịkwa chlorine egbochi mmekọrịta na aromatase. N'ihi ya enweghi ihe ize ndụ nke gynecomastia ma ọ bụ mgbanwe DHT.
Ke akpatre, Turinabol bụ ezigbo steroid maka ịkwadebe ahụ gị "na-emekarị". Ikike ya iji wuo mgbochi zuru oke pụtara na ọtụtụ ndị na-eme egwuregwu na-ejikwa ya n'oge oge ezumike (oge oge). Nke a na-enye ha ohere ịkwado ma mee ka ahụ ike dị ike n'enwetaghi uka.
Rawe Clostebol Acetate ntụ ntụ (CAS 855-19-6)
Ọkara Ndụ: 16 awa
Oge Nchọpụta: 11 - ọnwa 12
Nyocha Androgenic: 6
Raw Clostebol Acetate ntụ ntụ Marketing
Esi zụta Clostebol Acetate ntụ ntụ (CAS 855-19-6): zụta Turinabol ntụ ntụ si AASraw
AASraw na-enye 99% ọcha Clostebol Acetate raw ntụ ntụ ka bodybuilders ma ọ bụ n'okpuruala labs.
Raw Clostebol Acetate (Turinabol) ntụ ntụ Ezi ntụziaka:
Mmetụta nke Clostebol Acetate ntụ ntụ: Ntak ndị mmadụ hụrụ Tbol?
6-Dehydroxy Progesterone ntụ ntụ (1162-56-7)